MYUTSAWMYIT : စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသတင်း: နေပြီတော်အစိုးရနောက်မှ လျှို့ဝှက်ချက်များကို ဖေါ်လိုက်ပြီ
ထိုနောက် အဆိုပါ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပင် သူသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (ရ) ရက် နေပြည်တော် ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကိုယ်တိုင်ကပင် လက်ခံ တွေဆုံကာ (နိုင်ငံ) နှစ်ခုအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးကိစ္စရပ်များအား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်က အားလုံးမှာ ၄င်းတို့နှစ်ဦးအကြား ဘာသာပြန်ဆိုပေးသူ အရာ၇ှိများမှအပ အားလုံးတို့သည် တောက်ပြောင် ၀င်းလက် ကြွရွနေသော စစ်ဝတ်စစ်သားများအဖြင့် နွေးထွေးစွာပင် စကားပြောခဲ့ကြောင် ( ဘိုင်ဘလီယို) အွန်လိုင်းသတင်းစာတွင်လည်း ဖေါ်ပြထားလေသည်။
ယခုအခါတွင် ထို လာအို ၀န်ကြီးချုပ်မှပင် မဲ့ခေါင်လိုင်းရို သတင်းစာတွင် သူ၏ အံ့သြမှုအကြောင်း ထပ်မံမှတ်ချက်ပေးထားပုံမှာ…. သူသည် နေပြည်တော်သို့ ၂ ကြိမ် တိုင်တိုင် ဒေသဆိုင်ရာ သံတမန်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအရ လည်ပတ်သွားရောက်ခဲ့ပြီး ပထအကြိမ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် သူတွေ့ဆုံပြီးနောက် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ မှတ်တမ်းတင် ဓါတ်ပုံရိုက်ယူခဲ့ကြစဉ်က မြန်မာ့တပ်မတော်အရာရှိကြီးများသူနေရာနှင့်သူ အဆင့်လိုက် နေရာယူကာ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း၇ိုက်ယူခဲ့ကြပြီး ထိုသို့ မှတ်တမ်းတင် ဓါတ်ပုံရိုက်ယူရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကိုယ်တိုင်ကပင် သူတို့၏ တပ်မတော် စည်းကမ်းအတိုင်း ရားထူးအလိုက် အဆင့်အလိုက် စီတန်းနေရာယူကြစေပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး ၊ ဗိုချုပ်ကြီး (သူရ) ရွှေမန်း ၊ ထိုစဉ်အခါက ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်း ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်(ယခု)မြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတ၊ နှင့် နိုင်ငံခြားရေး ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ဖြစ်ကြကြောင်း ..ပြောဆိုလေသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် ထိပ်ပိုင်း အရာ၇ှိများ ငိုကြွေးခြင်း…..
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ သည် အလွန်ပင် ကျားထိုးဝါသနာပါပြီး စစ်ဘုရင် တိမှူး၏ အင်ပါယာထူထောင်ခြင်းဆိုသော စာအုပ်အား လက်ကပင်မချ အမြဲတမ်း ဖတ်လေ့၇ှိသူဖြစ်လေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် စစ်ဘုရင်တိမှူးသည် သူ၏ ချီတက်ရာ တပ်မတော်၏ မြင်းကုန်းနှီးပေါ်တွင်သာ အသက်ထွက်ခဲ့ကြောင်းလည်း သူ၏ ကျားထိုးရာတွင် ခေါ်ယူဆောင်ရွက်ပေးရသော လက်ရှိ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဌေးဦး(ဦးဌေးဦး) နှင့် သူ၏ ကိုယ်ရံတော် ဗိုလ်ချုပ် စိုးရှိန်တို့အား အမြဲလိုလိုပြောပြလေ့ရှိလေသူဖြစ်လေသည်။
သို့သော် ၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လ အကျဉ်းရုံးကျင်းပသော တော်လှန်ရေးနေ့အရာရှိများ ညစာ စားပွဲပြီးဆုံးသွားပြီးနောက် မတ်လ ၃၀ ၇က်နေ့တွင် လက်၇ှိ နေပြည်တော်တွင် ၇ှိသော ဘုရင်နောင် ခန်းမသို့ တပ်မတော် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် အခြားသော ဗိုလ်မှူးကြီးများအပါဝင် အရာရှိပေါင်း ၁၁၀ ယောက်အား နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး တို့မှ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံကာ လက်ရှိ အ၇ပ်ဝတ် အ၀တ်စားများအား တဦးချင်း အရာင်အဆင်းမတူညီစွာပဲ ပေးအပ်ကာ လက်ရှိမိမိတို့ တာဝန်ယူထားသော ဌာနအသီးသီးမှ မကြာခင် နုတ်ထွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အရပ်သားများအဖြစ် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ဆင်နွဲပြီး မိမိတို့တပ်မတော်မှ (၁၇) နှစ်နှင့် (၉)လကြာအောင် ရေးဆွဲခဲ့သော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပပေအတိုင်း ဆက်လက်၍ တပ်မတော်၏ အကျိုး တိုင်းပြည်၏တာဝန်တို့အား ဆောင်ရွက်သွားကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်ရှိမိမိတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော တပ်မတော်နှင့် မည်သို့ ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြရမည်ကို ဆက်လက်၍ လမ်းညွှမ်မှုများ ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ၂၅ မိနစ်မျှလောက်ကြာသော မိန့်ခွန်းတရပ် ပြောခဲ့လေသည်။
ထိုနောက် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်အေးမှ …မိမိအနေဖြင့်လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော တပ်မတော်အရာရှိအားလုံးတို့သည် မိမိ၏ ဆွေးမျိုး မောင်နှစ်မ ညီငယ်များဖြစ်ကြပြီး မိမိမှ အကိုကြီး တယောက်အနေဖြင့် ပြောလိုသည်မှာ အရပ်ဘက်သို့ နိုင်ငံတော်နှင့် တပ်မတော်၏ ကြီးမြတ်သော ဂုဏ်နှင့် အကျိုးစီးပွားအား ဆက်လက် စောင့်ထိန်းကာ အထက်မှ လမ်းညွှန်မှုများအား ဦးသွေ့မသုန် လိုက်နာစေလိုကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ ရှေ့ဦး ဦးဆောင်မှု မှ ယနေ့အထိ တပ်မတော်ကသာပင် နေရာတိုင်းတွင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ကာ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အရပ်ဘက် တပ်ဘက် ဂုဏ်များ မြင့်မား တောက်ပြောင်ခဲ့ကြောင်း သို့ကြောင့် မိမိတို့ အရပ်ဘက်သို့ ကူးပြောင်းတာဝန် ထမ်းဆောင်လင့်ကစား လက်ရှိတပ်မတော်နှင့် ပူးတွဲ ဆောင်ရွက်ကာ တိုင်းပြည်၏ ရှေ့အနာဂတ်ခရီးအား ဆက်လက် လျောက်လှမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း တဦးနှင့်တဦး ကာလကြာမြင့်စွာ တပ်မတော် ညီအကိုများဖြစ်လာခဲ့ရကာ တပ်မတော်၏ သဘောသဘာဝအတိုင်း အပြန်အလှန် ချစ်ခင် လေးစားမှု လိုက်နုာဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်ထားရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း (မိနစ်) ၃၀ အကြားမိန့်ခွန်းပြောကြားပြီးနောက် အရပ်ဘက်သို့ကူးပြောင်းဝင်ရောက်ရမည်ဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနှင့် အခြားသော တပ်မတော် အရာရှိများအား ချိပ်လုံချည် အရပ်ဝတ်တိုက်ပုံ နှင့် ခေါင်းပေါင်းများ ပေးအပ်ခဲ့လေသည်။
ထိုသို့ပေးအပ်သော အချိန်ဝယ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်(ယခု) သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင်ပင် မျက်ရည်စက်လက်ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ အခြားသော ဗိုလ်ချုပ်နှင့် တပ်မတော် အရာရှိများအဖို့ မည်မျှ ငိုကြွေးကြသည်ကို ပြောဖွယ်ရာ မရှိကြောင်းပါ…….
နေပြီတော်အစိုးရနောက်မှ လျှို့ဝှက်ချက်များကို ဖေါ်လိုက်ပြီ (၂)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကိုယ်စားလှယ်များအား ဖိတ်ကြားကား မတ်လ ၂၈၊ ၂၉ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား ၀င်ရောက်ယှင်ပြိုင်ရန် ဆက်လက် မှတ်ပုံတင်ရေးအတွက် လက်ရှိ ထိုကာလ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ပြဌာန်းချက်များအား ကန့်ကွက်သပိတ်မှောက်သည့်အနေဖြင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား ၀င်ရောက်ပါဝင်ပတ်သက်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း စုံညီစွာ မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက်တွင် မြန်မာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ထ ခုန်လုမတတ် ၀မ်းသာကြကုန်လေသည် ဟု စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်တဦးက စာရေးသူအား ပြောပြလေသည်။
အကြောင်းမှာ အန်အယ်ဒီမှ လက်ရှိကျင်းပရန်ပြင်ဆင်ထားသော ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မပါဝင်ပဲ ၀င်ရောက်လာလေလျင် ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီးသန်းရွှေတို့ စီစဉ်ထားသော ဒေသဆိုင်ရာ အားလုံး အနိုင်ရ၇ှိေ၇းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကွပ်ကဲကြပ်မတ်လုပ်ဆောင်မှူများတွင် အနှောက်ယှက် တစုံတရာအကြီးကျယ်ဖြစ်နိုင်သည်ကို တထစ်ချ တွက်ခဲ့ကြပြီး အန်အယ်ဒီအား နောက်ပိုင်းတွင်မှသာ နိုင်ငံတကာနှင့် ညှိနိုင်းဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များတွင်သာ အသုံးချလိုကြောင်း စီစဉ်ခဲ့သည်။
အန်အယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပြီးသွားသည်နှင့် နိုင်ငံတကာသတင်းများတွင် အကြီးကျယ် အန်အယ်ဒီ ဗွိုင်းကောက်လုပ်ကြောင်းဖေါ်ပြလာပြီး ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ကုလသမ၈္ဂနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် သက်ဆိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ် ဒေသ အသင်းဖွဲ့များ အမှန် ပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ဆိုသည့်( All Inclusive )ဖြစ်သော ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ကြောင်း ( အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် All Inclusive ဖြစ်သော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရန်လိုကြောင်း အသီးသီး ထုတ်ပြန် ကြေငြာမှုများ ပြုလုပ်လာလေသည်။
ထိုသို့ နိုင်ငံတကာနှင့် ကုလသမဂ္ဂမှ ဝေဖန်ထောက်ပြလာသော အခြေနေအားတုံန့်ပြန်ချေပသော အနေဖြင့် လက်၇ှိ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဦးတင်အေး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံညှိနိုင်းရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်ချုပ် ဦးအောင်ကြည် ..ယခုလက်ရှိ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် မြင့်ဆွေ တို့မှ အန်အယ်ဒီ၏ ဗဟိုကော်မတီ နှင့် တိုင်းဒေသ ကော်မတီဝင်တို့၏ မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုအား မကြေနပ်ခဲ့ကြသော လက်ရှိ အန်ဒီအက်ဖ်မှ ဒေါက်တာ သန်းငြိမ်း ၊ ဦးခင်မောင်ဆွေတို့အား တိတ်တဆိတ် ၃ ကြိမ်မျှ အေ၇းပေါ် လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံးပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အား ၀င်ရောက်ယှင်ပြိုင်နိုင်ရန် ဖေးမ စီစဉ်ပေးခဲ့လေ၏။ ၄င်းတို့၏ မဲဆွယ် လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာများအား အတော်တန်လှုပ်ရှားခွင့်ပြုသည့်အနေဖြင့် ယခု လဒ်စားမှုဖြင့် အရေးယူခြင်းခံခဲ့ရသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသဆိုင်ရာ စစ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းသန်းမှ နိုင်ငံတကာ အမြင်ရှင်းစေရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ရသည်။
ထိုတင်မက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရရွေမှ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်း
အား ခေါ်ယူစေပြီး ၄င်းအနေဖြင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပရန်ရှိသော အာစီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းဝေးတွင် မိမိတို့ အစိုးရအနေဖြင့် ဒေါ် ( အောင်ဆန်းစုကြည်) အား မည်သို့ လူသားချင်းကိုယ်ချင်းစာနာပါကြောင်းပေါ်လွင်ရန် ၂၀၀၉ခုနှစ် မေလ (၅) ၇က်နေ့တွင် အမေ၇ိကန်နိုင်ငံသားတဦးအား မိမိတို့ အစိုးရမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်မှ လျှို့ဝှက် ထွက်ခွာစဉ် ဖမ်းဆီမိပြီး အိမ်ထဲတွင် သတ်မှတ်ချုပ်နှေင်ထားသော ကာလ အတွင်းဝယ် သိုဝှက်ကာ အဆိုပါ အမေ၇ိကန်နိုင်ငံသား (ဂျွန်ယက်တော) အား လက်ခံထားပေးသောအကြောင်းရာဖြင့် နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ ထပ်မံအေ၇းယူခဲ့ရကြောင်း၊ ထိုသို့ နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥဒေ အရ ရေးယူရာတွင်လည်း သူမအား မိမိတို့အစိုးရမှ လူသားချင်းစာနာစွာဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေအရ တရားရုံးမှ ၃ နှစ် အား ၂၀၀၉ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်တွင် အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ ဥက္ကကြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေမှ သနားညှာတာစွာဖြင့် ပစ်ဒဏ်များအား လျော့ပေါ့ပေးသည့်အနေဖြင့် ၁၈ လမျှသာ ကျခံစေရန် ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ကြောင်း ဆိုသော ကြက်တူရွှေးနုတ်တိုက် တင်ပြနိုင်သော စာတစောင်အား ရိုက်နှိပ်ကာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းမှ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အာစီယံနိုင်ငံများဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးများ အစည်းဝေးတွင် ခရားရေလွှတ် ရွတ်ဆို တင်ပြခဲ့ရာ ဧည်သည်တော်အဖြင့် တက်ရောက်ရာကြသော အီးယူ နိုင်ငံခြားရေးကောက်မတီမှ မစ္စတာ ဟေဘယ်လဒ် နှင့် အမေရိကန် သံတမန်များမှ မတ်တပ်ထရပ်ကာ လက်ခုန်သြဘာများပေး၍ လာရောက်လိမ်လည် ထွက်ဆိုနေကြောင်းအား သိရှိကြောင်း ပြသခဲ့လေသည်။
အမှန် ဆိုရပါမူ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန်ယက်တောသည် မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိနေသည်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့ကပင်ဖြစ်ပြီး ၄င်းအနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား သွားရောင် အင်တာဗျူးခွင့်ပြုရန် ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်းရုံးသို့ သွားရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း နှင့် အဆိုပါအသင်းမှ တာဝန်၇ှိသူ လက်ရှိ သူရ ဦးတင်အေးနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ၄င်းမှ ဂျွန်ယက်တော၏ တင်ပြမှုအား ဆောင်ရွက်ပေးရန် အာမခံခဲ့ကြောင်း ..ထိုနောက် ထောက်လှမ်းရေး ဒုညွန်ချုပ် ယခု အနားယူနေသော ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်း ၏ အကြံဖြင့် နေပြည်တော်သို့ တိုက်ရိုက်တင်ပြပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေးတို့ အပါဝင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့ ဂျွန်ယက်တောအား စေလွှတ်ရန် စနစ်တကျဗျူဟာဆွဲ စီစဉ်ခဲ့ကြောင်းဖြစ်လေသည်။
ထိုနောက် ရန်ကုန် ဆိပ်ကန်းသားလမ်း ဟော်တယ်တွင် တည်းခိုနေသော ဂျွန်ယက်တောအား ပဲခူးကလပ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် သီရီရတနာ ဟော်တယ်သို့ ပြောင်းရွေ့စေခဲ့ပြီး ထောက်လှမ်းရေးအောက်ခြေအဆင့်များဖြင့် ၅ ရက်ကြာမျှ အတူ သွားလာနေထိုင်ရောနှောနေစေပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်သို့ လှမ်းမြင်နေရသော အင်းယားတဖက်ခြမ်းသို့ နေ့စဉ်သွားရောက်စေပြီး တိတ်တဆိပ် ရေကူးသွားခြင်းအားဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်သို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်ကြောင်း..ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာလည်း နိုင်ငံတကာတွင် လူသိထင်ရှားသော ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်၍ မိမိေ၇ာက်သွားပါက တစုံတရာ နှင်ထုတ်ခြင်း လက်မခံငြင်ဆန်ခြင်းများပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း သူမ အလွန်ပင် မေတ္တာတရားကြီးမားကြောင်း မိမိကူးခတ်ရမည့် ရေမှာလည်း အလွန် နက်ပြီင်္း လှိုင်းထန်နေသော အခြေနေမျိုးမဟုတ်ကြောင်း အပြင် တကယ်တွေ့လိုပါက ထိုနည်းလမ်းသာ သုံးသင့်ကြောင်း အခြာသူများ မသိ၇ှိနိုင်ရန် မိမိတို့မှ လူအခြေနေအသွားလာများကို စောင်ထိန်းကြည့်ရှု့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့လေသည်။
ဂျွန်ယက်တောမှ ပထမတွင် ငြင်းဆန်နေသော်လည်း နောက်ရက် နောက်ရက်များတွင် လက်ခံသည့်သဘောမျိုးဖြစ်လာကာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် မိမိ ကူးခတ်သွားရန်စတင်လုပ်ဆောင်သော ညတွင် မိမိနှင့် တွေ့နေကြသော အဖေါ် ၃ ယောက်ပါ ကူညီရန် ရောက်လာစေပြီး မိမိအား စောင့်ကြည့်ပေးခဲ့ပါကြောင်းတို့အား ၄င်းအား ဖမ်းဆီးပြီးနောက် စစ်ဆေးရာတွင် ထွက်ချက် ပေးခဲ့လေသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေတို့၏ ယုတ်မာလှည့်စားသော အကြံစည်တို့အား ကောက်ချက်ချဆွဲကြည့်သော် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန်ယက်တော မှ အထက်ပါ ကျူးလွန်မှုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာရန် အခြေနေမ၇ှိသေးခင်က နေပြည်တော် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား မေလ ၂၃ ရက်နေ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာဥပဒေအရ မလွှတ်ပေး၍ နေမရလောက်အောင်ပင် အခြေသို့ရောက်ရှိနေပြီး ၊ ၄င်းတို့ စီစဉ်ထားသော ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် အကြံစီများအတွက် နောက်ဆုံးအဆင့် မဖြစ်မနေ လွတ်ပေးခဲ့ရပါမူ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန်အထိပင် ကြိုတင် စဉ်းစားနေခဲ့ကြောင်း ၊ သို့သော် အရူးထသော ဂျွန်ယက်တောမှ ရောက်ရှိလာပြီး ကြံဖွတ်အသင်းရုံးတွင် အကူညီတောင်းခံရာမှ အကြံဥာဏ်ပေါ်လာရပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မလွှတ်ခင် ၃ ပတ်လောက်မျှသာ လိုသော အချိန်တွင် အနည်းကပ် တက်သုတ်ရိုက် ကြံစည်ကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နောက်ထပ် ၁၈ လ ထပ်မံချုပ်နှောင်၍ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား ကလိမ်ကလည်နည်းအသွယ်သွယ်ဖြင့် ကျင်းပကာ တက်သုတ်ရိုက် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်းပါ…..
မြောက်ကိုရီးယားနှင့် မြန်မာ ဆက်ဆံရေးသည် 2001 ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလမှ ထိထိမိမိ ထိတွေ့ ဆက်ဆံခဲ့ကြောင်း အထောက်ထားများ တွေ့ခဲ့ရလေသည်။ မြောက်ကိုရီးယား အင်္ဂျင်နီယာ ၃၂ ယောက် ပါဝင်သော ယုံဗြောင်း အမည်ရ သဘောင်္သည် မြန်မာရေပိုင်နက် အတွင်းသို့ 2001 ခု ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့တွင် တရုတ် ငါးဖမ်းလှေ အသွင်ဖြင့် ၀င်ရောက်လာခဲ့ပြီး မြန်မာရေတပ်မှ ၄င်းသဘောင်္အား စောင့်ကြပ်လိုက်ပါလျှက် သီလ၀ါ ရေတပ် စခန်းသို့ ည ၁၁ နာ ၄၄ မိနစ်တွင် ရောက်၇ှိခဲ့ကြောင်း သိရပြီး ၄င်းရေတပ် ၏ အစီစဉ်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အရာ၇ှိ ၄ ဦးမှ သွားရောက်တွေ့ဆုံကာ ၄င်းတို့အား မေမြို့သို့ သွားရောက်ရန် စီစဉ်ပေးခဲ့လေသည်ဟု ထိုအချိန်က လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဌာနတွင် ဗိုလ်မှုးအဆင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေခဲ့သည့် ဦး မောင်မောင်မင်းမှ စာရေးသူအား အချက်လက်များ ပေးခဲ့သည့်အပြင် စာရေးသူမှ ၄င်းအား အာအက်အေ(RFA) သတင်းဌာနမှ ဦးခင်မောင်စိုး တို့နှင့် တွေ့ဆုံပေးကာ တိုက်ရိုက် အသံလွှင် နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးခဲ့ပြီး မြောက်ကိုရီယား သဘောင်္တွင် ညူကလီးယား သို့မဟုတ် ဒုံကျဉ်များတည်ဆောက်သော အင်္ဂျင်နီယာများ လိုက်ပါ ကာ ၀င်ရောက်လာကြောင်း ၃ ကြိမ်မျှ အာအက်အေ(RFA)မှ ထုတ်လွှင် တင်ဆက်ခဲ့လေသည်။
ထိုအချိန်မှ စ၍ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေမှ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ဗိုလ်ကလေး ဒေသ စစ်ဆင်ရေးတွင် အရပ်သားနှင့် ကေအန်ယူ တပ်ဖွဲ့ဝင်များဟု ဆိုလေသော လူပေါင်း ၃၀၀လောက်အား မမြစ်ပြတ်ချေးမှုန်း သတ်ဖြတ်ပြခဲ့ပြီး သူရဘွဲ့ ရရှိခဲ့လေသော ဧရာဝတီ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကွပ်ကဲရေး တိုင်းမှူး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ရွှေမန်းအား တိုက်ရိုက်တာဝန်ပေးကာ မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ဆက်ဆံရေးတွင် ကိုင်တွယ် လုပ်ဆောင်ရန် နေရာချပေးခဲ့လေ၏ ။။။ သို့ကြောင့် ထိုအခါက အတွင်းရေးမှုး (၁) လည်းဖြစ်သူ ၀န်ကြီး ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်၏ ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ အား မြောက်ကိုရီးယားနှင့် လုပ်သော ကိစ္စရပ်များအား ၀င်ရောက် ပတ်သက် စုံစမ်းလေ့လာခြင်း မပြုရန် ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေမှ ရာဇာသံ ပေးခဲ့လေသည်။
2004 ခုနှစ် မေလတွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ပုတ္တရာ ဂျာရာ တွင် ၀န်ကြီးချုပ် မဟာသီယာ၏ ကိုယ်ပိုင် မြို့သစ်တည်ဆောက်ပုံအား အပြီးသတ် လေ့လာပြီး နေပြည်တော်တွင်မြို့သစ်တခု စတင် တည်ဆောက်ရန် လုပ်ဆောင်စေခဲ့ပြီး နေပြည်တော် ၏ အနောက်ဘက် မိုင် ၃၃ မိုင် အကွာတွင် မြောက်ကိုရီးယား အင်္ဂျင်နီယာများမှ မြေအောက် လှိုင်ဂူများ အား ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကပင် စတင် တည်ဆောက်နေခဲ့ပြီး ၄င်း လှိုင်ဂူများအတွင်း တပ်မတော်၏ အကြီးစား ဒုံးခွင်းဒုံးကျဉ်များ ထားသိုရန်နှင့် အရေပေါ် မြေအောက် စစ်ရေးဆိုင်ရာ ညွှမ်ကြားမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် စီမံကိန်းရေးဆွဲခဲ့လေ၏။
မြန်မာ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာများသည် မြောက်ကိုရီးယားသို့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ တရုတ်ပြည်မှ တဆင့် ကြားခံကာ ဥဒဟို သွားရောက်နေကြပြီး မြောက်ကိုရီးယားမှ ထုတ်လုပ်သော ဒုံကျဉ် လက်နက်များ အစိတ်ပိုင်းလိုက် တင်သွင်းရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း ဂျိမ်းစာစောင် အတွဲ ၁၀၅ အခန်း (၄)တွင် အတိလင်း ဖေါ်ပြလာသည်ကို အနောက်နိုင်ငံများမှ မှင်သက်သွားကြလေသည်။
ထိုအချိန်တွင် အာဏာသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာ နောက်ကွယ်တွင် အားပြိုင် နေကြသော ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ့တို့၏ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာများ တရုတ်ပြည်မှတဆင့် မြောက်ကိုရီးယားသို့ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် သွားရောက်နေသည်ကို ထောက်လှမ်းရေး ဒုညွန်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်းအား သတင်းအချက်လက်တင်မက အထောက်ထား ဓါတ်ပုံများဖြင့် အခိုင်မာ တင်ပြလာသောအခါ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်၏ နိုင်ငံတကာ စည်းရုံးသိမ်းသွင်ရေး ဗျူဟာအားထိခိုက်လာနိုင်ကြောင်း အခိုင်မာ အဆိုပြုကြလေသည်။
သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန်၏ မရဲဘဲ ကျွဲစီးနေခဲ့သော ၄င်း၏ အခြေနေအား ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ အုပ်စုမှ သိနေမိခဲ့သည်မှာ ၂၀၀၀ ခုနှစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဒလတွင် ဆန္ဒပြမှုအား ကိုင်တွယ်ခဲ့ပုံကို အသေးစိတ်လေ့လာမိကြပြီး ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်အား အချိန်မရွေးဖယ်ရှား သုတ်သင်နိုင်ရန်အလို့ငှာ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်းအား ဒုတိယ ထောက်လှမ်းရေး ညွန်ချုပ်အဖြင့် ခန့်အပ်ကာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်၏ အောက်တွင် ထိုးသွင်း တုံးခု ထားခဲ့လေသည်ကို ကမ္ဘာကျော် လူကြမ်းကြီး ဗိုလ်ခင်ညွန့်တယောက် 2004 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာတွင် လှလှပပ ဖြုတ်ထုတ်ထောင်ချခြင်း ခံလိုက်ရလေသည်။
ကိုရီးယား ဆိုင်ရာ ရုပ်ရှင်ကားများအား ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဂျွန်လမှစ၍ ကိုရီးယား ယဉ်ကျေးမှုအား မြန်မာပြည်သူများ ပိုမို ထိတွေ နားလည်နိုင်စေ၇န် မြ၀တီမှ အခန်းဆက် တွဲကြီးများဖြင့် အသဲအသန် အရှိန်မြှင့်ကာ ကိုရီးယား ယဉ်ကျေးမှုအား မြန်မာပြည်အတွင်းသို့ အတင်း ထိုးသွင်းခဲ့လေပြီး ၊ မြောက်ကိုရီးယား မြန်မာ ဆက်ဆံရေးအတွက် ကြည်း ရေ လေ ကွပ်ကဲရေမှူး ဗိုလ်ချုပ်ရွှေမန်းမှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းနှင့် တရုတ်ပြည်သို့ သွားရောက်ကာ မြောက်ကိုရီးယား အေးဂျင့်များနှင့် ထိတွေ့မှု ပိုမိုနီးစပ်လာရပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစ၍ ကို၇ီးယား စားသောက်ဆိုင်များ ကိုရီးယား စင်တင် ဂီတပွဲများ ကိုရီးယား ကိုရီးယား စသော အသံများ မြန်မာပြည်တွင် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ဖြစ်လာစေခဲ့ကာ မြောက်ကိုရီးယားနှင့် သူလျှိုလုပ်ဆက်ဆံနေသော ဗိုလ်ချုပ်ရွှေမန်းတို့မှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ အစီစဉ်အတိုင်း တိုင်းပြည်အတွင်းသို့ အင်တိုက်အားတိုက် ထိုးသွင်းခဲ့လေသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ကြည်း ရေ လေ ညှိနိုင်း ကွပ်ကဲရေးမှူးချုပ် အဆင့်သို့ သူရ ဗိုလ်ချုပ် ရွှေမန်းမှ မြောက်ကိုရီးယားသို့ တရုတ်ပြည်လေကြောင်း ခ၇ီးစဉ်ဖြင့် အတိလင်း သွားရောက်ခဲ့ပြီး ထိုခရီးစဉ်တွင် မြောက်ကိုရီးယား၏ ဒုံးကျဉ်ထုတ်လုပ်သော လုပ်ငန်းခွင်အထိသို့ပင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့ခွင့်ရခဲ့ကာ မိမိနှင့် အတူ ပါလာသော ရွှေရည်ချိန် (၂၄) ကရက်တွင် ထည့်သွင်းပြုလုပ်ထားသည့် မြန်မာ့ အဖိုးတန် ပတ္တမြားအား အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆ ဒသမ ၃)သန်း ခန့် ကို မြောက်ကိုရီးယား၏ ညူကလီးယား လက်နက် ထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ညွန်ချုပ်ကြီး ဂျုံဗြွန်ဟို နှင့် အဖွဲအား ၄င်း မြောက်ကိုရီးယား ထိပ်ပိုင်း အာဏာပိုင်များအား၎င်း အသီးသီးပေးအပ်ကာ မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ဝေဟင်ပစ် ဒုံးကျဉ် များ ၀ယ်ယူရေး စာချုပ်( ၈) ခုအား အပြီးသတ်ချုပ်ဆိုခဲ့လေ၏။
ထိုအချိန်တွင် ညောင်နှစ်ပင် ညီလာခံ ရုက္ခစိုးကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် မှလည်း ၄င်းအားတာဝန်ပေးထားခဲ့သည့်အတိုင်း ၂၀၀၈ ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲအား အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ဟု လက်မထောင်နေသော ကာလနှင့် တချိန်တည်းကျရောက်နေကြကာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်ရွှေမန်းတို့ မြွေများသကဲ့သို့ပင် အချင်းချင်း ခြေမြင်နေကြသူများ ဖြစ်ခဲ့ကြလေသည်။
သို့သော် ကံမကောင်း အကြောင်းမလှစွာပဲ တပ်ချုပ်ကြီး ဗိုလ်သန်းရွှေမှ ကြိုတင် လျာထားသော နိုင်ငံတော် မောင်းနှင် ကိုင်တွယ်ရေး ယန္တယားတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရွှေမန်းသည် ၄င်း၏ နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော် ထိပ်ပိုင်း ဦးစီးဦးဆောင် အမြင့်ဆုံး ရာထူးအား ပေးအပ် မောင်နှင်ရန် ခိုင်ခိုင်မာမာပင် အစီစဉ်များ ချမှတ်ထားခဲ့သော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ရွှေမန်းတယောက် ကျားကွက်တခုကြောင့် ကင်းမပေါက်ပဲ အစားခံရတော့မလိုလိုပင် ဖြစ်ခဲ့ရသော အကြောင်းမှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ရွှေမန်းတို့၏ မြောက်ကိုရီးယား မြန်မာဆက်ဆံရေး အကြောင်းရင်းများနှင့် အချို့သော ဗွီဒီယိုဖိုင် ဓါတ်ပုံသတင်း အချက်လက်ဖိုင်များ နိုင်ငံတကာသို့ယိုစိမ့်ပေါက်ထွက်ခဲ့ရပြီးhttp://www.energyintel.com/pages/login.aspx?fid=art&DocId=698432 တွင် အတိလင်း အကြီးက